IOS 15 Vitamin FaceTime oo wata astaamo cusub oo qabow | Wararka IPhone
macruufka 15 halkan waa. Apple waxay go'aansatay in ugubkii ugu horreeyay ee lagu soo bandhigo WWDC 2021 uu yahay cusboonaysiinta shan iyo tobnaad ee nidaamka hawlgalka ee iPhone. Cusbooneysiin diiradda saarey afar tiir oo aasaasi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin xiriirka dadka kale, adduunka inagu xeeran iyo ka fogaanshaha waxyaabaha jeedinaya. War weyn ka bilow isbedelka wajiga ku darida ikhtiyaarro aad u xiiso badan oo loo qaabeeyey inay la mid noqdaan adeegyada kale ee wicitaanka fiidiyowga.
La wadaag shaashadda iPhone-kaaga FaceTime iyo iOS 15 iyo wax ka badan
Hada laga bilaabo wicitaanada FaceTime ee iOS 15 waxay noqon doonaan kuwa aad u raaxo badan, dabiici ah oo macquul ah. Xul ah maqalka goobta, kaas oo dhawaqa kaqeybgalayaasha oo dhami isku dhafan doono waxaana loo maqli doonaa sidii oo aan isla qolka ku jirno, iyadoo ujeedadu tahay in la kordhiyo xaqiiqada wicitaanada fiidiyowga. Waxaa la xusay sida masiibada ay saameyn ugu yeelatay howlaheena caadiga ah Applena ay dooneysay inay ka faa'iideysato taas
Ikhtiyaar ayaa sidoo kale lagu daray in la joojiyo buuqa banaanka ka taagan ama waxa noo diidaya in si sax ah loo maqlo, si aan u kala shaandheeyno codkeenna oo aan kor ugu qaadno si cad. Dhamaan maqalka sidoo kale waa la nuugi karaa Ballaaran, muuqaal kale oo xiiso leh oo ka mid ah macruufka cusub ee 15 ee FaceTime.
Dhinaca kale, FaceTime ayaa aad iyo aad u sii kordheysa sida madal wicitaan fiidiyoow ah. Shabakadaha waxaa lagu daray dhammaan kaqeybgalayaasha halkaasoo lagu muujiyey cidda hadleysa marwalba. Dariiq lagu jahwareeriyo asalka sidoo kale waa lagu daray, oo ay ugu magac dareen Sawirka Sawirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » IOS 15 Vitamin FaceTime oo wata astaamo cusub oo qabow